Horudhac: Real Madrid vs Sevilla… (Kaddib hanashadeedii Spanish Super Cup, Los Blancos oo maanta dib u bilaabaysa ciyaarista horyaalka La Liga) – Gool FM
Aaron Ramsey oo deeq lacageed ku bixiyay la dagaallanka Coronavirus
Kaliya ma’ahan Lautaro Martinez, Barcelona oo weerar ku ah khadka dhexe ee Kooxda Inter Milan
(Madrid) 18 Jan 2020. Kaddib markii ay ku guuleysatay koobka Spanish Super Cup oo ku soo qaaday Waddanka Saudi Arabia, Kooxda Real Madrid ayaa dib ugu soo laabanaysa ciyaarista horyaalka La Liga Todobaadkan, waxaana ay garoonkeeda ku soo dhowaynaysaa maanta naadiga Sevilla.
Los Blancos ayaa haatan fadhisa kaalinta labaad ee kala horreysa horyaalka La Liga, waxaana faqriga goolasha kaga sarreysa Barcelona oo ay isku dhibco yihiin, halka Sevilla ay ku jirto kaalinta afaraad, markii ay qaab wacan ku qaadatay horyaalka xilli ciyaareedkan 2019-20.
Garsooraha: Juan Martinez Munuera (Spain)
Ciyaaryahanka Kooxda Real Madrid ee Fede Valverde ayaa kulankan ganaax ku maqnaanaya kaddib markii uu kaarka cas oo toos ah qaatay kulankii Final-ka Spanish Supercopa.
Gareth Bale ayaa markale taam ah kaddib markii uusan kooxdiisa Los Blancos ula safrin Waddanka Saudi Arabia, waxaana kulankan uu weerarka kooxdiisa kula soo bilaaban karaa Luka Jovic.
Sergio Ramos ayaa weli shaki la galinayaa kulankan, kaddib markii dhaawac canqowga ah uu ka soo gaaray Spanish Supercopa, waxaana ku soo bilaaban kara kulankan Eder Militao.
Dhinaca kale Sevilla ciyaaryahankeeda Sergio Reguilon ayaa diyaar ah oo dib ugu soo laaban kara ciyaartista horyaalka La Liga kaddib ganaax uu la maqnaa, waxaana uu ku soo bilaaban karaa booska garabka bidix ee daafaca.
Lucas Ocampos ayaa ka ganaaxan kooxda martida ah kaddib markii uu qaatay kaarka cas oo toos ah, taasoo ay tahay in la arko Franco Vazquez oo soo galaya kulankan una ciyaaraya kooxda Sevilla.
Joan Jordan ayaa diyaar ah kulankan kaddib markii uu ka soo laabtay dhibaato ka haysatay isha, waxaana uu ka soo muuqan karaa khadka dhexe ee kooxda booqanaysa garoonka Santiago Bernabeu.
>- Real Madrid ayaa guuleysatay 13 ka mid ah 14-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda kula ciyaartay Sevilla tartammada oo dhan.
>- Kooxda Real Madrid ayaa dhalisay ugu yaraan labo gool 12-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku soo dhoweysay Sevilla dhammaan tartammada kala duwan.
>- Waxa ay kooxda Real Madrid shabaqeeda gool ka ilaashatay shan ka mid ah todobadeedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku dheeshay horyaalka La Liga.
>- Los Blancos ayaa guuldarro la’aan ah oo aan la garaacin tobankeedii kulan ee ugu dambeeyey horyaalka La Liga.
>- Kooxda Sevilla ayaan la garaacin 10 ka mid ah 11-keedii kulan ee ugu dambeeyey oo ay ciyaartay horyaalka La Liga.
Horudhac: Arsenal vs Sheffield United… (The Gunners oo doonaysa inay ka aar-gudato The Blades)